Wararka - NEWGENE Waxay heshay Ansixin Is-baaris ah oo ku saabsan Belgium iyo Sweden
COVID-19 Qalabka baaritaanka Antigen wuxuu helay oggolaanshaha is-baaritaanka ee Wasaaradda Caafimaadka Beljamka (FAMHP) iyo Wakaaladda Wax soosaarka Caafimaadka Iswiidhan (Hay'adda Wax soosaarka Caafimaadka Iswiidhan). NEWGENE waa shirkaddii ugu horreysay ee Shiineys ah ee ka hesho oggolaanshaha is-tijaabinta labadan dal ee Yurub, ka dib Denmark iyo Czech Republic oo ay NEWGENE ka heshay oggolaansho is-tijaabineed ka hor.
NEWGENE COVID-19 Qalabka Baaritaanka Antigen (is-tijaabinta) ayaa ka sarreeya xasaasiyad iyo qaas ahaaneed. Natiijada baaritaanka waxaa lagu akhrin karaa 15 daqiiqo qalliin fudud, oo ku habboon dadka aan lahayn kormeer iyo tababar xirfadeed. NEWGENE COVID-19 Qalabka baaritaanka Antigen (is-tijaabinta) ayaa ku habboon baaritaanka guriga shaqsiyaadka, taas oo qaadata waqti yar marka la barbardhigo imtixaannada PCR. Wax soosaarka is-tijaabinta ee 'NEWGENE' wuxuu si weyn uga yareyn doonaa cadaadiska isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka.
Belgium iyo Sweden labaduba waxay leeyihiin in kabadan 10 milyan oo qof, waana dalal si xun ay u saameeyeen COVID-19 ee Yurub. NEWGENE waxay sii wadi doontaa inay soo bandhigto alaabooyin lagu baaro oo heer sare ah ayna gacan ka geysato ka hortagga iyo xakameynta cudurrada faafa ee labadan dal.